China i-Sugarcane Juicer Machinery Production Line ifektri nabakhiqizi |JUMP
Ulayini Wokukhiqiza Umshini Womoba
Imishini yokukhiqiza umoba/isitshalo
I-Automatic Fruits Juicer Machine
25 Setha/Isethi ngonyaka umshini wokudonsa amanzi ozenzakalelayo
Iphakethe lezinkuni elizinzile livikela umshini ekusiteleni nasekulimaleni.Ifilimu yepulasitiki yamanxeba igcina umshini ungamanzi nokugqwala.Iphakeji elingenayo i-fumigation lisiza ukukhishwa kwamasiko okubushelelezi.Umshini wosayizi omkhulu uzolungiswa esitsheni ngaphandle kwephakheji.Noma ngokuya ngezidingo zakho
phakathi nezinyanga ezi-2
Umshini wokukhipha ijusi ozenzakalelayo
.1. Ukuvala i-enzyme futhi uvikele umbala wokunamathisela.
I-1.Adopt ubuchwepheshe base-Italy, i-sub-head kanye nekhanda eliphindwe kabili, ukugcwaliswa okuqhubekayo, ukunciphisa ukubuyisela;
2.Ukusebenzisa umjovo we-steam ukwenza inzalo, ukuqinisekisa ukugcwaliswa kwesimo se-aseptic, impilo yeshalofu yomkhiqizo izoshintsha iminyaka ekamelweni lokushisa;
3.Enqubweni yokugcwalisa, kusetshenziswa imodi yokuphakamisa i-turntable ukugwema ukungcoliswa kwesibili.
Siyakwamukela ukuxhumana nathi:
Umuntu ongathintwa: Nina
Iselula/ wechat: +8613681836263
1.Iyini isikhathi sewaranti yomshini?
Unyaka owodwa.Ngaphandle kwezingxenye ezigqokile, sizohlinzeka ngesevisi yamahhala yokulungisa izingxenye ezilimele ngenxa yokusebenza okuvamile ngaphakathi kwewaranti.Lesi siqinisekiso asibandakanyi ukuguga nokudabuka ngenxa yokuhlukunyezwa, ukusetshenziswa kabi, ingozi noma ukuguqulwa okungagunyaziwe noma ukulungiswa.Ukumiselela kuzothunyelwa kuwena ngemuva kokuthi isithombe noma obunye ubufakazi bunikeziwe.
2.Iyiphi isevisi ongayinikeza ngaphambi kokuthengisa?
Okokuqala, singakunikeza umshini ofaneleka kakhulu ngokwesikhundla sakho.Okwesibili, Ngemva kokuthola ubukhulu beshabhu yakho yokusebenzela, singakuklama isakhiwo somshini wokusebenzela.Okwesithathu, singahlinzeka ngosekelo lobuchwepheshe ngaphambi nangemva kokuthengisa.
3.Ungaqinisekisa kanjani isevisi yangemuva kokuthengisa?
Singathumela onjiniyela ukuze baqondise ukufakwa, ukugunyazwa, nokuqeqeshwa ngokuvumelana nesivumelwano sesevisi esisayinile.
Okwedlule: Imishini Yokucubungula Ijusi Engenasici Yensimbi Engenasici
Olandelayo: I-Hot Sale 100% Yomugqa Wokucubungula I-Watermelon Ohlanzekile
Guqula Iphrojekthi Ewukhiye Wolayini Wokukhiqiza Utamatisi
Gcwalisa I-Automatic Blueberry Juice Concentrate ...
Ukukhiqizwa Kwejusi Ye-Prickly Pear Esezingeni Eliphezulu...
Isethi Ephelele Yomshini Wokwenza Ijusi I-Papaya
Ibhodlela lePlasitiki Lomshini Wokwenza Ijusi likaPapaya ...